Frank Lampard oo difaacay go’aankii Chelsea ay kula soo saxiixatay Kai Havertz – Gool FM
(London) 23 Sebt 2020. Macalinka kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa xaqiijiyay inuu ogyahay booska ku haboon xiddigooda cusub ee Kai Havertz.
Frank Lampard ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay in Kai Havertz booskiisa uu kala cadaan doono marka uu taam ahaansho buuxda helo.
Hadalka Frank Lampard ayaa imaanaya kaddib markii halyeeyga Liverpool ee Jamie Carragher uu dhaleeceeyay talaabadii ay Chelsea u qaaday saxiixa Kai Havertz, isagoo muujiyay sida uu ula yaaban yahay suurtogalnimada looga faa’ideysan karo adeegiisa marka loo fiiriyo nidaamka taatikada ay u ciyaarto Blues.
Wargeyska “Daily Mail” ayaa daabacay wareysi uu bixiyay Macalinka kooxda Chelsea ee Frank Lampard, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Kai Havertz.wuxuu ka ciyaaray dhowr boos oo kala duwan xirfadiisa ciyaareed, wuxuu ka soo ciyaaray boosaska 9-aad, 8-aad iyo 10-aad, waxaan leeyahay aragti gaar ah ee ku saabsan isaga”.
“Waxaan u baahanahay inuu dib u soo ceshado heerkiisa jir ahaaneed, weyna kala cadaandoontaa sababta uu halkaan u joogo”.
Haddalka Jamie Carragher ee ku aadanaa Kai Havertz ayaa ahaa:
“Halkee ayuu ka ciyaaraa Kai Havertz.? Wuxuu u muuqdaa inuu yahay ciyaaryahanka lambarka 10-aad, wax badan oo kubadda cagta ahna kuma aragno hada, uma maleynayo inay taasi ku haboontahay kooxda Chelsea”.